Chine Vermiculite orinasa sy mpanamboatra | Lingshou
Ny vermiculite dia karazana mineraly efa misy potika izay misy Mg ary manala ny faharoa ao anaty silicates aluminium hydrated. Miorina amin'ny fiovan'ny toetrandro na hydrothermal fanovana biotite na phlogopite. Ireo sokajy amin'ny alàlan'ny dingana, vermiculite dia azo zaraina ho vermiculite tsy lafo ary mitombo ny vermiculite. Sokajy amin'ny loko, dia azo zaraina ho volamena sy volafotsy (ivory). Vermiculite dia manana fananana tsara toy ny fitrandrahana hafanana, fanoherana ny hatsiaka, fanoherana ny bakteria, fisorohana ny afo, fampidiran-drano ary ny fitrandrahana feo, sns. Rehefa atody ho an'ny 0.5 ~ 1.0 minitra eo ambanin'ny 800 ~ 1000 ℃, dia azo ampitomboina haingana ny volony amin'ny 8 ka hatramin'ny 15 impiry, hatramin'ny 30 heny, miaraka amin'ny loko niova ho volamena na volafotsy, mamokatra vermiculite miitatra tsy mihetsika izay tsy anti-asidra ary mahantra amin'ny fampandehanana herinaratra. Vermiculite aorian'ny fanitarana ny fivoarana dia miendrika endrika matevina, miaraka amin'ny habetsahana amin'ny ankapobeny dia 100-200kg / m³ (Noho ny habetsaky ny vermiculite izay nitarina dia ho be dia be ny vidin'ny fitaterana, ka ny vermiculite haondrana matetika dia karazana tsy voaloa) .
Ny karazana vermiculite crude: 0.15-0.5mm, 0.5-1mm, 1-3mm, 2-4mm, 3-6mm, 4-8mm, 8-16mm.
Toeram-pitsaboana sy zavatra simika an'ny Vermiculite
Noho ny mari-pahaizana hidirana sy ny oksidratika samihafa, tsy mitovy ny fananganana simika vermiculite. Ny pormulikan simika vermiculite dia: Mg x (H2O) (Mg3-x) (ALSiO3O10) (OH2)
Ny votoatiny (%)
Fampiharana ny Vermiculite
Amin'ny fambolena, vermiculite dia azo ampiasaina amin'ny maha-marim-pototra ny tany, noho ny fifanakalozana ny cation sy ny fampidirana azy, manatsara ny firafitry ny tany, ny fitahirizan-drano ary ny hamandoana ny tany, ny fitrandrahana ny fitrandrahana ny tany sy ny votoatin'ny rano, manova ny asidra asidra ho tany tsy miandany; vermiculite koa dia afaka mitana anjara toerana mahavelona, ​​manelingelina ny fiovana haingana ny lanjan'ny PH, manao ny famotsorana ny zezika tsikelikely amin'ny sehatra fitomboan'ny vokatra, ary avela hampiasa betsaka amin'ny zezika ho an'ny zavamaniry fa tsy manimba. Ny vermiculite dia azo omena amin'ny voankazo ihany koa misy ny K, Mg, Ca, Fe, ary ny trace Cu, Zu. Raha ny tsindrona, ny fifanakalozana fifanakalozana sy ny famoronana simika ny vermiculite, dia mihazona fikojakojana zezika, fihazonana rano, fitahirizana rano, fisondrotana ary zezika mineraly, sy anjara asa maro hafa. Ny fitsapana dia nasehony: nametraka ny vermioma vermiculite 0.5-1% nafangaro tao anaty zezika, nahafahana namokatra ny vokatry ny fihenan'ny vokatry ny 15-20%.
Amin'ny fambolena zaridaina, ny vermiculite dia azo ampiasaina amin'ny voninkazo, legioma, fambolena voankazo, fiompiana ary lafiny hafa, ho an'ny fambolena tany sy ny mpanamboatra, fa koa ho an'ny kolontsaina milamina. Raha ny zava-maniry fihinam-boa dia ny fambolena hazo voankazo sy ny voan-tsokosoko, dia manararaotra ny famindra sy ny fitaterana ny zavamaniry. Ny vermiculite dia afaka mampandroso tsara ny fivoaran'ny fambolena sy ny fitomboan'ny voa, afaka manome rano sy sakafo ny zavamaniry maniry mandritra ny fotoana maharitra, ary hitazona ny mari-pana ny fakany. Ny vermiculite dia afaka mahatonga ny zavamaniry hahazo rano sy mineraly ampy amin'ny dingana voalohany, hampiroborobo ny zavamaniry maniry haingana ary hampitombo ny famokarana.
Ny vermiculite mitongilana, vita amin'ny tafo, dia hilalao hafanana manempotra hafanana, manafana ny trano amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra. Ny fampiasana biriky vermiculite amin'ny rindrin'ny fisintahana amin'ny fisandratana avo na ny fampiasana rindrambaiko vermiculite ho fitaovana fisarahana ao amin'ny hotely na ivom-pialam-boly, ny vokatry ny fampidirana feo, ny porofon'ny afo, ny fitahirizana ny hafanana sy ny sisa dia haseho feno ary ny trano dia hahena ihany koa ny entany .
Ny fantsom-pifandraisana bitika dia miforona taorian'ny fanitarana ny vermiculite, izay ahafahana manitatra ny vermiculite izay lasa fitaovana fanodinana feo malefaka. Raha ny fatrany dia 2000C / S, ny taham-peo mampiakatra 5mm matevina vermiculite dia 63%, 6mm 84% ary 8mm 90%.
Ny vermiculite dia tena mahatohitra ny ranomandry satria ny fahafahany sy ny heriny dia mihazona foana na dia rehefa avy nandalo 40 in-droa fanandramana tsio-drivotra ambanin'ny taona -20 ℃. Izy io dia misy poizina ary manana fananana tsindrona. Izy io dia afaka mitazona hafanana ary misoroka ny fiterahana. Ankoatr'izany, dia afaka mametaka ny taratra taratra izany, noho izany ny takelaka vermiculite dia azo apetraka ao anaty laboratoara mba hisolo ireo loham-bidy lafo vidy mba handoavany hatrany amin'ny 90% amin'ny taratra miparitaka. 65mm matevina vermiculite dia mitovy amin'ny 1mm matevina mitarika.
Ny vovony vermiculite nanitatra dia namboarina vita tamina vermiculite, nisoroka tamin'ny hafanana avo, screening, fikosoham-bary. Ny tena manokana dia: 3-8mm, 1-3mm, 10-20mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 60mesh, 200mesh, 325mesh, 1250mesh. Fampiharana ao amin'ny: fitaovana fanodinana trano, fitaovana fananganana vatan-trano ao anaty fiara, mpanamboatra fiara, làlan-tsindrona fanamafisam-peo, safon-jiro misy tsipika azo antoka, boiler mitazona akanjo mafana, vy vy, simenitra famonoana afo, kojakoja insulation automotive, fitaovana insulation fiaramanidina, fitaovana fitehirizana mangatsiaka, fitaovana fitaterana hatsiaka Fitaovana insulasi, rindrina mitatao rano amin'ny rindrina, fanamafisana ny vy, famonoana afo, sivana, fitehirizana mangatsiaka, linoleum, takelaka tafo, cornice, tabilao dielectric, rindrina pirinty fanontana, fanaovana dokambarotra any ivelany, sary hoso-doko, mampitombo ny fahitana ny sary, hazo kitay malefaka sary. kitapon'ny kitay hazo, volamena ranomainty sy varahina, mandoko ireo fanafody ivelany.
Manaraka: Fandraisana lamba
Fampitaovana miloko 560